Ukugquma kobushushu-Guangzhou Hongwu Material Technology Co., Ltd.
I-Nanoparticles yokusetyenziswa kwe-Thermal Insulation
Inkqubo yokufaka i-Thermal ye-nano ebonakalayo yokugquma kwe-thermal:
Amandla emitha yelanga ikakhulu egxile kubude bebude be-0.2 ~ 2.5 um. Ukuhanjiswa kwamandla athile kulandelayo: Ummandla we-UV we-0.2 ~ 0.4 um ubala i-5% yamandla onke. Ummandla obonakalayo yi-0.4 ~ 0.72 um, ubala i-45% yamandla onke. Ummandla osondeleyo we-infrared ngu-0.72 ~ 2.5 um, ukubala iipesenti ezingama-50 zamandla onke, ke amandla amaninzi kumaza elanga ahanjiswa ekukhanyeni okubonakalayo nakummandla okufuphi ne-infrared, apho ummandla we-infrared osondeleyo ubala isiqingatha samandla. unganikeli kwimbonakalo. Ukuba eli candelo lamandla livaliwe ngokufanelekileyo, linokuba nefuthe elifanelekileyo lokufaka i-thermal ngaphandle kokuchaphazela ukubonakala kweglasi.Ngoko ke, kuyimfuneko ukulungiselela into enokuthi ikhusele ukukhanya kwe-infrared kwaye idlulise nokukhanya okubonakalayo.
Iinanomaterials ezintathu zisetyenziswe kakuhle kwizambatho zokwambathisa eziselubala:
1. INano ITO
I-Nano ITO (In2O3-SnO2) ineempawu zokukhanya ezikhanyayo ezibonakalayo kunye neeparitha zomqobo, kwaye yinto ebonakalayo ebonakalayo yokugquma i-thermal. Izinto zokutyabeka ze-ITO, kuyimfuneko ukomeleza inkqubo yophando yokunciphisa ukusetyenziswa kwe-indium phantsi kwesiseko sokuqinisekisa isiphumo sokugquma okubonakalayo kwe-thermal, ukunciphisa iindleko zokuvelisa.
2. INano Cs0.33 WO3
I-Cesium tungsten yobhedu ebonakalayo nano thermal yokugquma ukugquma ime ngaphandle kwezinto ezininzi ezibonakalayo zokuthambisa i-thermal ngenxa yendlela enobungqongileyo yokusingqongileyo kunye neempawu zokugquma okuphezulu kwe-thermal, ngokusebenza kakuhle kwe-thermal insulation okwangoku.
3. UNano ATO
I-Nano ATO i-antimony doped tin oxide coating luhlobo lwento ebonakalayo ebonakalayo yokugquma i-thermal ngezinto ezinokukhanya okuhle kunye ne-thermal insulation. ukongeza i-nano ATO kwingubo yokwenza ubushushu obugqityiweyo obunokusombulula ngempumelelo ukusombulula ingxaki yokufaka ubushushu kwiglasi. Xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo, inezibonelelo zenkqubo elula kunye neendleko eziphantsi, kwaye inexabiso lesicelo esiphakamileyo kakhulu kunye nethemba elibanzi lemarike.